« Ny vazaha mody miady, fa ny Malagasy mody mihavana », hoy ny Kardinaly - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
– Miarahaba anao Eminence. Andro lehibe tokoa ny Alahady 8 jolay 2018 eto amin’ny FKMP, satria io no Lamesa malagasy voalohany tarihanao amin’ny fomba manetriketrika. Ianao no Kardinaly Malagasy fahaefatra. Ahoana ny fihetsem-ponao teo ampandrenesana fa voatendry ho Kardinaly ianao ?
Faly miarahaba antsika rehetra amin’izao fihaonantsika mianakavy izao aho ka itarihako Lamesa malagasy voalohany eto Parisy taorian’ny nanendrena ahy ho Kardinaly. Tsy nampoiziko ny nanendrena ahy ho Kardinaly ka velon-tebiteby ary sahiran-tsaina aho. Noraisiko ho antso avy amin’Andriamanitra io fanendrena io ka dia am-pinoana no nandraisako azy. Mila miantehitra amin’ny fahasoavany mandrakariva aho
Avy hatrany dia tsaroako ny teny ao amin’ny Taratasin’i Md Paoly ho an’ny Korintianina 2 Kôr. 12, 9 manao hoe : “Ampy ho anao ny fahasoavako”.
– Tsy ny Kristianina Katolika irery fa ny vahoaka Malagasy rehetra no niandrandra izany Kardinaly izany. Tonga ihany ilay vaovao lehibe nandrasana ny 20 mey 2018, ary natao nandritra ny Consistoire tao Roma ny 28 jona 2018. Koa inona tokoa ny lanja sy anjara toeran’izany Kardinaly izany eo anivon’ny Fiangonana Katolika ?
Ankoatry ny fahafahana mifidy izay ho Papa rahefa tonga ny fotoanan’izany ny Kardinaly dia mpanolo-tsainan’i Papa izany hoe mpiara-miasa aminy akaiky kokoa. Azo lazaina fa manana ny maha izy azy ny Fiangonantsika eo anatrehan’i Papa Ray Masina ary mihamafy hatrany ny fifandraisana aminy. Manana anjara toerana ihany koa isika eo amin’ny fandrafetana ny Fiangonana maneran-tany.
– Ny Fiangonana dia mijoro vavolombelona eo anivon’ny fiarahamonina. Marary ny fiarahamonina any Madagasikara. Sady efa mahantra ny vahoaka malagasy no ianjadian’ny herisetra sy tebiteby isanandro. Tao amin’ny hafatra navoakan’ny Fivoriamben’ny Evekan’i Madagasikara ny 12 novambra 2015 dia izao no voalaza tao : “Tsy misy intsony ny fanajana ny soa iombonana, babon’ny fitiavan-tena ny ankamaroan’ny Malagasy ka potika ny fiainana amin’ny lafiny rehetra” (III.2). Nahazo Kardinaly i Madagasikara izao, inona no mety miova eo amin’ny famindra sy fihetsiky ny Fiangonana any Madagasikara ?
Tiako marihina fa manana ny fomba fiasany ny Fiangonana katolika amin’ny firenena anankiray amin’ny alalan’ny Fivondronamben’ny Eveka. Io Fivondronamben’ny Eveka io dia manana ny Biraony, manana ny Filohany.
Ny fanapahan-kevitra rehetra rehetra izay itambarana dia miainga amin’io « Conférence » na Fivondronamben’ny Eveka io.
Ny fisian’ny Kardinaly dia tsy manova io rafitra io fa vao mainka manamafy azy. Antenaina ary fa raha miteny izahay dia hanongilan-tsofina ny rehetra ary hiova famindra isika mianakavy.
– Tao anatin’ny Taona Masina momba ny “Famindrampon’Andriamanitra” no nivoaka io hafatra io. Fa maninona, Eminence, no mikatso ny Fampihavanana any Madagasikara nefa voalaza fa soatoavina Malagasy ny FIHAVANANA ?
Mikatso ny Fampihavanana aty Madagasikara nefa SOATOAVINA malagasy ny Fihavanana.
Ny fampihavanana dia tsy midika hoe : avela tsimatimanota ny olona rehetra, manaraka izany tsy maintsy ao anatin’ny fahamarinana no ifampiresahana fa tsy ao anaty fihatsarambelatsihy. Mila mahatsiaro tena ny tsirairay fa nanao ny tsy mety tokoa aho ka nanimba zavatra eo amin’ny fiarahamonina.
Raha tsy misy ireo fepetra voalaza ireo sarotra ny miresaka fampihavanana : raha tsy izany dia hoy ny sangisangy zary tenany manao hoe : Ny Vazaha mody miady fa ny Gasy mody mihavana.
– Farany, inona no hafatrao ho an’ny Malagasy rehetra satria azy ianao, ary ho an’ny Katolika Malagasy manokana ?
Misaotra ny olona rehetra izay naneho fitiavana tamin’ny fomba maro : nitrotro am-bavaka, nahafoy tena sy fananana.
Samy hiezaka isika mianakavy mba handresy marina ny zavatra mampikatso ny firenentsika amin’ny alalan’ny FIBEBAHANA. Ho tia tanindrazana marina. Aoka tsy hilamin-tsaina amin’ny fisian’ny elanelana mampiteny ny moana eo amin’ny mpanana sy ny mahantra.
Hitsodrano izay ezaka hataontsika mianakavy anie ny Tompo ary samy ho salama mandrakariva.
Misaotra indrindra, Eminence, ary mirary fahombiazana hombam-pahasoavana ho anao. Miandry ny fiverenanao ny Malagasy. Ho tsara miverina e.
Tafa nifanaovana tamin’i ELIASY Liva
Takilam-pifandraisana ISATOKANTRANO (FKMP)
Natao tao Parisy, zoma 6 jolay 2018